August 13, 2019 Online Bunner 0
ရေ​ဘေးအန္တရာယ်​ရင်​ဆိုင်​​နေရတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်​ငံ၊ Karnataka ပြည်​နယ်မှာ ဒုက္ခ​တွေကြားထဲကပဲ ထူးခြားဖြစ်​စဉ်​တစ်​ခု ရှိခဲ့ပါတယ်​။ ပြည်​နယ်​မှာ ​ရေလွှမ်းမိုး​မှု​ကြောင့်​ ​နေအိမ်​​တွေ​ဟာ ​ရေထဲစုန်းစုန်းမြုပ်​ကုန်​ပြီး ​အိမ်​​ခေါင်​မိုး​တွေကိုသာ မြင်​ရ​တော့တဲ့ အ​ခြေအ​နေပါ။ ဒီထဲက ​နေအိမ်​တစ်​လုံး​ရဲ့ ​ခေါင်​မိုး​ပေါ်မှာ​တော့ မိ​​ကျောင်းကြီးတစ်​​ကောင် ထီးထီးကြီး တင်​​​လာတာကို အံ့အားသင်​ဖွယ်​ရာမြင်​​တွေ့ခဲ့ရပြီး ဒီမြင်​ကွင်းကို အစအဆုံးမှတ်​တမ်းယူရိုက်​ကူးထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်​ဟာ လူ​​တွေရဲ့အမိုက်​စား​ထောက်​ခံအား​ပေးမှု​တွေ​ကြောင့်​ […]
မိန်းမတော်တော်များက အိမ်ထောင်ကျကံကောင်း မကောင်းဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး မိန်းမတော်တော်များကအိမ်ထောင်ကျကံကောင်းမကောင်းဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး။ကိုယ်တွေ့ဖူးတဲ့ မိန်းလေးတွေရှိတယ် အိမ်ထောင်မကျခင်က ယောကျာင်္းတွေနဲ့ တယောက်ပီးတယောက်တွဲ။ တစ်ယောက်တောင်မပြတ်သေးဘူး နောက်တစ်ယောက်က အဆင်သင့်။ ဒါမဲ့ အဲ့လိုမိန်းမတော်တော်များများက အိမ်ထောင်ကျကံကောင်းလိုက်ကြတာ။သူတို့ယောင်္ကျားတွေကရွှေတဆင်ဆာကားတွေဘာတွေအပြည့်စုံထားပေးကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးကြတယ်။အမြဲတမ်းတောက်တောက်ပြောင်နေရတယ်။ ဒါမဲ့ တချို့မိန်းမတွေကတော့လည်း အိမ်ထောင်မကျခင်ချစ်သူတစ်ယောက်တည်းအပေါ် သစ္စာရှိခဲ့တယ်။ သူ့အပေါ်အနှစ်နာခံခဲ့တယ်။သူတို့ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး မပြတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။သူ့တစ်ယောက်တည်းကိုသာ ချစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဘေးမှာ တခြားယောက်င်္ကျားတွေချစ်ခွင့်ပန်ရင်တောင်ငြင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ယောကျာင်္း […]
Drama မင်းသမီးလို့ အသိအမှတ် ပြုလောက်အောင် အငို၊ အလွမ်း အခန်းတွေကို ပီပြင်အောင်သရုပ် ဆောင်နိုင်သူက မိုးပြည့်ပြည့်မောင် ပါ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် အငိုမင်းသမီးလေးဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေ အချစ်ပိုခဲ့ကြရပါတယ်။ မိုးပြည့်ပြည့်မောင်ကတော့ သမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ မိုးပြည့်ပြည့်မောင်တို့ သားအမိဟာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစါခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် သရုပ်ဆောင် မိုးပြည့်ပြည့်မောင် […]
မဟာဖြေဆေး၏အန္တာရာယ်ဆိုတာနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတိပေးထုတ်ပြန်ချက် မင်္ဂလာပါ ဦးစိုင်းလိတ်၏မဟာဖြေဆေး ( ဝုန်းဝမ်းဆေးတိုက် ရန်ကုန် ) မှ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသေး ဆေးများကို တိုင်းရင်းဆေးဌာန၏စစ်ဆေးချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ၍ ထုတ်လုပ်ခွင့်ရရှိထားသော ဆေးစွမ်းကောင်းတလက်ဖြစ်ပါတယ် အဖေဖြစ်သူ တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီး ဦးတန်းကေး မှစတင်ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပီး ယခုလက်ရှိအချိန်ထိ တိုင်းရင်းဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်အမှတ် – TMR008287 ( 1118 […]
မီတာခတက်ခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ် တစ်နေ့တာ အတွေ့ကြုံ ကျောင်းအပ်ဖို့်မိတ္တူ သွားကူးတယ် A4 ကို- ယခင် 50 / ခု 70ပက်စပို့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ် – ယခင် 1000 / ခု 1500. မူကြိုအတွက် ဗလာစာအုပ်သွားဝယ်တယ်တစ်အုပ် ယခင် ၃၅၀ / ခု […]
ရေ မှာ မှတ်ဉာဏ်ရှိတယ်၊ water memory လို့ခေါ်တယ်တဲ့
ရေ မှာ မှတ်ဉာဏ်ရှိတယ်၊ water memory လို့ခေါ်တယ်တဲ့ molecule memory မော်လီကျူး တွေ နဲ့ မှတ်တာ လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရေ ကိုသောက်မိရင် ကမ္မဇီဝရုပ် ကိုထိခိုက်တယ်တဲ့။ ဒါဟာသိပ္ပံနည်းကျ စမ်းသပ်တွေ့ရှိထားတာ မို့ အံ့သြမိပါတယ်။ ယူကျူ့ မှာ နိုဘယ်ဆုရပုဂ္ဂိုလ်တဦးအပါအဝင် […]
ပန်းမကြိုက်တဲ့ မိန်းခလေးတွေရဲ. စိတ်နေစိတ်ထား မိန်းကလေးတော်တော်များများကပန်းတွေကိုနှစ် သက်ကြပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာမှပန်းတွေကို အထူးတလည်မနှစ်သက်တဲ့မိန်းကလေးအနည်းစုလည်းရှိပါသေးတယ် ဒါကြောင့်ပန်းတွေကိုမနှစ်သက်တဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေအချစ်ကိုစဉ်းစားပုံအကြောင်းတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ သူတို့လေးတွေဟာရုပ်ရည်အလှအပကိုစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းသူတွေဖြစ်ကြပြီး အရည်အချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလှအပကိုသာမြတ်နိုးတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် …။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ထူးကိ်ုယ်ချွန်နဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ရပ်တည်နေကြသူပါ… သည်းခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့အတွက် ရည်မှန်းချက်ကိုမြန်မြန်ရောက်လွယ်သလို သူများတကာရဲ့ချိုးနှိမ်မှုတွေကိုလည်းခံရတတ်ပါတယ်။သည်းခံတာကိုအခွင့်ကောင်းယူတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ဖော်ရွေတာကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါတတ်တာကြောင့် တိတ်တိတ် ပုန်းကိုယ့်ကိုမကောင်းကြံစည်ပြီးမနာလိုတဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်…။ သူတို့ဟာ ရဲရင့်ထက်မြက်ပြီး အောင်မြင်ဖို့ကိုအမြဲတမ်းတွေးဆနေတဲ့ […]
သက္ကရာဇ် ၂၀၇၀ ကျရင် ရန်ကုန်မြို့ရေမြှပ်သွားနိုင်ကြောင်း ဦးထွန်လွင်သတိပေး ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်မြင့်တတ်မူကြောင့် သက္ကရာဇ် ၂၀၇၀ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့က ရေမြှပ်သွားနိုင်ကြောင်း မိုးလေ၀သ ပညာရှင် ဦးထွန်းလွင်က ပြောကြားထားပါတယ် “ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်မြင့်တတ်မူကြောင့်ရေမြှပ်မဲ့စာရင်းမှာ မြန်မာက ပါနေတယ်။ သက္ကရာဇ် ၂၀၇၀ မှာမြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းမှာ ရေအားက ပေ၂၀ […]
ကားရေမြုပ်သွားရင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက် ၆ ချက် မိမိကားကို ပါကင်ထိုးထားပြီး တစ်နေရာရာကို သွားနေချိန် မိုးရွာပြီး လမ်းရေကြီးလို့ ကားရေမြုပ်သွားရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ မိုးရေထဲ ကားမောင်းနေရင်းနဲ့ မထင်မှတ်ပဲ ကားစက်ရပ်သွားရင် ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲ။ လမ်းကျပ်နေလို့ ကားကို စက်နှိုးပြီးရပ်ထားတုန်း လမ်းပေါ်ရေတွေတက်ပြီး ရုတ်တရက်ရေကြီးလာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ၁။ […]